नेपालमा मोदीको पु’त्ला ज’लेको भन्दै भाजपा नेताले फोन गरेर मोदी रिसाएको भन्दै ओलीलाई दिए द’बाब – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपालमा मोदीको पु’त्ला ज’लेको भन्दै भाजपा नेताले फोन गरेर मोदी रिसाएको भन्दै ओलीलाई दिए द’बाब
नेपालमा मोदीको पु’त्ला ज’लेको भन्दै भाजपा नेताले फोन गरेर मोदी रिसाएको भन्दै ओलीलाई दिए द’बाब
काठमाडौं- नेपाली भूमि मिचेर भारतले सडक बनाएको ’विरोधमा नेपालमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पु’त्ला ज’लाइएपछि भारतीय जनता पार्टीका नेता भगतसिंह कोश्यारीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई फोन गरेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी रि’साएको भन्दै द’बाब दिएको खुलेको छ। सोमबार प्रधानमन्त्री ओलीसँग भेटेका गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङले गको समय संवादमा प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई उदृत गर्दै भने, ‘कोश्यारीले मलाई फोन गरेर मोदी दु’खित भएका छन्, मोदी रिसाएका छन्’ भनेर प्रेसर गरिरहेका छन्।’
प्रधानमन्त्रीले यस्तो कुरा गरेपछि आफूले ‘किन?’ भनेर प्रश्न गरेको र प्रधानमन्त्रीले आफूसँग पु’त्ला ज’लेकोबारे भारतले द’बाब दिएको बताएको उनले खुलाएका थिए। ‘मेरो पु’त्ला ज’ल्यो। सारा काठमाडौंमा ज’लिराछ’ भनेर प्रधानमन्त्री मोदी दु’खी हुनुभएको छ भनेर कोश्यारीले भनेका छन्,’ ओलीलाई उद्धृत गर्दै गुरुङले भने। यसपछि आफूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भारतले नै वि’वादित भूमिमा सडक बनाएपछि नेपालीले वि’रोध गरेको उल्लेख मुख्यमन्त्री गुरुङले बताए। ‘तिमीहरू (भारतीय पक्ष) वि’वादित एरियामा खुरुखुरु बाटो बनाउँछौ।
अनि हामी छोड्छौं त? हाम्रा नेपालीले वि’रोध गर्दैनन् त? सबै नेपालीले वि’रोध गरिराछन्। वि’वादित क्षेत्रमा त दुईपक्षीय छलफल गरेर काम गर्नु पर्‍यो नि,’ आफूले प्रधानमन्त्री ओलीसँग भनेको स्मरण गर्दै गुरुङले भने, ‘बिना छलफल त हामीले पनि एकतर्फी रूपमा काम गर्नु भएन। उहाँ हरूले पनि गर्नु भएन नि! यस्तो कुरामा प्रधानमन्त्री (मोदीले)ले चि’त्त दुखाउनु भएन।’ नेपाल लाइभ बाट
नेपालमा कोरोनाको महामारी: मंगलवार पत्रकार र स्वास्थ्यकर्मी सहित ९० जना संक्रमित, नयाँ जिल्लामा पनि फैलियो कोरोना